September 16, 2021 - Online Hartha
ညကြီးမိုးချုပ်မှာ မျက်နှာလဲမကောင်း ဓာတ်မီးလေးကိုင်ပြီးထိုင်နေတဲ့အဖိုးကို တွေ့လို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့သောအခါ
September 16, 2021 by Online Hartha
ညကြီးမိုးချုပ်မှာ မျက်နှာလဲမကောင်း ဓာတ်မီးလေးကိုင်ပြီးထိုင်နေတဲ့အဖိုးကိုတွေ့လို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့သောအခါ ရင်နာလိုက်တာ အဘိုးရယ် ခုချိန်ထိ မချရသေးတဲ့ သမီးအလောင်းကို ကားနဲ့ သွားချမှာ အိမ်ရှေ့ကဖြတ်သွားမှာမို့ ဓာတ်မီးလေးနဲ့ ထိုင်စောင့်နေတာတဲ့လေ😢 မမြင်ရတာ ရက်ဆယ်ချီနေတဲ့ သမီးကို နေကောင်းမှသွားတွေ့မလို့ဆို ခုကျ ဆုံးတာလေးတောင် အနားနား မရှိပေးနိုင်လိုက်ဘူး နောက်ဆုံးအချိန်လေးတောင် ဆုံးသွားတဲ့ သမီးမျက်နှာလေး မမြင်လိုက်ရ ငါ့သမီးနောက်ဆုံးခရီးကို အဝေးကနေပဲ ငေးကြည့်မလို့တဲ့လေ 💔 လောဘသားအချို့ကြောင့်သာ မဟုတ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ချစ်ရတဲ့သူတေကို မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူး 😢 #edit ခုတော့. ….😭😭 သွားချပါပီ… မွေးထားတဲ့ထဲ သမီးလေးတစ်ယောက်ပဲပါလို့ တုန်နေအောင်ချစ်ရတာတဲ့ အခုတော့ အဘိုးသမီးကို အခေါင်းမပါပဲ ဖျာကြီးနဲ့ ပဲ ပတ်ချလိုက်ရတာ အဘိုးသိမှာစိုးလို့ ပြောမထွက်ဘူး😭 Unicode Version ညကွီးမိုးခြုပျမှာ … Read more
နေအိမ်ဝင်းအတွင်း တောင်ပို့ပေါက်သည်ရှိသော် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်သလဲ
အိမ်ဝင်းအတွင်း တောင်ပို့ ပေါက်လျှင်(ရှေးလူကြီးသူမတို့၏အဆို) နေအိမ်ဝင်းအတွင်း တောင်ပို့ပေါက်သည်ရှိသော်….. နေအိမ်ဝင်းအတွင်း တောင်ပို့ပေါက်သည့်အခါတချို့လူများကအိမ်ကိုဖျက်ဆီးမည်ဟုသဘောထားကာတောင်ပို့ကိုတူးဆွဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြသည်တချို့လူများကတော့ကောင်းကျိုးပေးမည့်အရာဟုသဘောထားပြီ ရာဇမတ်လေးဖက်လေးတန်ကာ၍တံခွန်၊ကုက္ကား၊မုလေးပွားများစိုက်၊အမွှေးနံ့သာများပက်ဖျန်းကြသည်ဖယောင်းတိုင်၊အမွှေးတိုင်များကိုအဆက်မပြတ်ထွန်းညှိပူဇော်ထားကြသည်တောင်ပို့ကတစ်စထက်တစ်စမြင့်တက်လာရာ အိမ်ကဆင့်တန်းဖြုတ်၊ခင်းထားသောပျဉ်ချပ်များကို ခွာပစ်ရသည်အထိယုံကြည်ကိုးစားစွာဖြင့်ရိုသေစွာထားကြသည်ကိုလည်းတွေ့ဖူးသည်။ညီငယ်လေးပမာခင်မင်ရသောသက်ကိုကသူ၏အိမ်အောက်တွင်တောင်ပို့ပေါက်လာသည့်အခါ အဆိုပါတောင်ပို့ကိုသည်အတိုင်းပဲထားရမည်လား၊တောင်ပို့ကို ဖြိုချပစ်ရမည်လားဟုမေးခဲ့ဖူးပါသည်များစွာသောလူတို့သည်အိမ်ထဲသို့မဟုတ်ခြံဝင်းထဲ၌တောင်ပို့ပေါက်လာလျှင်ကောင်းသည်ဟုသာထင်မှတ်ကြလေ သည်ရှေးလူကြီးသူမတို့ကမူကောင်းကျိုး၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သောတောင်ပို့ပေါက်မှုနှင့်မကောင်းကျိုး၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သောတောင်ပို့ပေါက်မှုဟူ၍နှစ်မျိုးရှိကြောင်းဆိုခဲ့ကြပေသည်….။ ရှေးလူကြီးသူမတို့သည်အကြားအမြင်၊ ဗဟုသုတရင့်ကျက်ကြသူများပီပီနောင်လာနောက်သားတို့တောင်ပို့ပေါက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုသိမြင်မှတ်သားလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ကဗျာလင်္ကာများစပ်ဆို ထားခဲ့ပေသည၎င်းလင်္ကာမှာ၁အရှေ့တောင်ခွင်၊တောင်ပို့ထင်၊မီးလျှင်လောင်တတ်စွ၂အနောက်ပေါက်ငြား ၊အောက်လူများနာဖျားဘေးဒဏ်ရ၃အနောက်တောင်တွင်၊တောင်ပို့မြင်၊သူလျှင် ခိုးတတ်လှ၊၄ကြင်းငါးရပ်မှာ၊ ပေါက်ရောက်လာ၊မှန်စွာချမ်းကြည်မြ၊၅မကောင်းရပ်နေ၊ပေါက်လာပေ၊ရွှေရည်လောင်းလေကြ၊၆။ဤသို့ယတြာ၊ပြုသောခါ၊ရောဂါရန်ကွယ်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အဋ္ဌလဂ်ခွင်အရအရပ်ရှစ်ပါးရှိရာ၁အရှေ့မြောက်အရပ်၊၂အရှေ့အရပ်၊၃အရှေ့တောင်အရပ်၊၄တောင်အရပ်၊ ၅အနောက်တောင်အရပ်၊၆အနောက်အရပ်၊၇အနောက်မြောက်အရပ်၊၈မြောက်အရပ်ဟူ၍ဖြစ်လေသည်အိမ်အတွင်း၊ခြံဝင်းအတွင်းတောင်ပို့ပေါက်သောအရပ်သည်မည်သည့် အရပ်၌ဖြစ်သည်ကိုတိကျစွာသတ်မှတ်ရပါမည်။ရှေးလူကြီးသူမတို့မိန့်ဆိုခဲ့သောကဗျာလင်္ကာအရတောင်ပို့ပေါက်သောအရပ်သည်အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်ဖြစ်ပါကအိမ်ကိုမီးလောင်တတ်သည်အနောက်အရပ်တွင်ဖြစ်ပါက လူငယ်လူရွယ်များနာဖျားတတ်သည်။ဘေးရန်သင့်တတ်သည်အနောက်တောင်အရပ်တွင်ဖြစ်ပါကနေအိမ်တွင်သူခိုးခိုးခံရတတ်သည်။ကျန်သည့်အရပ်ငါးမျိုးတွင်တောင်ပို့ပေါက်ပါကစည်းစိမ်ဥစ္စာကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာမည်ဟု ဆိုလိုပေသည်မကောင်းသောအရပ်တွင်တောင်ပို့ပေါက်လျှင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုရှေးဗေဒကဝိတို့ကယတြာထားခဲ့ကြသည်။၎င်းယတြာမှာမိမိအိမ်သောက်ရေအိုးထဲမှရေကိုခပ်၍မကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်များပပျောက်ပါစေဟု ဆုတောင်းကာပေါက်လာသည့်တောင်ပို့ပေါ်သို့နောက်ပြန်လောင်းရပေမည်။နေအိမ်(သို့မဟုတ်)ခြံဝင်းထဲ၌တောင်ပို့ပေါက်ပါကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲကောင်းကျိုးလား၊ မကောင်းကျိုးလားဆိုသည်ကိုအထက်ပါလင်္ကာအရဆန်းစစ်ကာမကောင်းကျိုးဖြစ်ပါကယတြာချေရုံသာရှိပါတော့သတည်း။ credit Unicode Version အိမျဝငျးအတှငျး တောငျပို့ ပေါကျလြှငျ(ရှေးလူကွီးသူမတို့၏အဆို) နအေိမျဝငျးအတှငျး တောငျပို့ပေါကျသညျရှိသျော….. နအေိမျဝငျးအတှငျး တောငျပို့ပေါကျသညျ့အခါတခြို့လူမြားကအိမျကိုဖကျြဆီးမညျဟုသဘောထားကာတောငျပို့ကိုတူးဆှဖယျထုတျပဈလိုကျကွသညျတခြို့လူမြားကတော့ကောငျးကြိုးပေးမညျ့အရာဟုသဘောထားပွီ ရာဇမတျလေးဖကျလေးတနျကာ၍တံခှနျ၊ကုက်ကား၊မုလေးပှားမြားစိုကျ၊အမှေးနံ့သာမြားပကျဖနျြးကွသညျဖယောငျးတိုငျ၊အမှေးတိုငျမြားကိုအဆကျမပွတျထှနျးညှိပူဇျောထားကွသညျတောငျပို့ကတဈစထကျတဈစမွငျ့တကျလာရာ အိမျကဆငျ့တနျးဖွုတျ၊ခငျးထားသောပဉျြခပျြမြားကို ခှာပဈရသညျအထိယုံကွညျကိုးစားစှာဖွငျ့ရိုသစှောထားကွသညျကိုလညျးတှဖေူ့းသညျ။ညီငယျလေးပမာခငျမငျရသောသကျကိုကသူ၏အိမျအောကျတှငျတောငျပို့ပေါကျလာသညျ့အခါ အဆိုပါတောငျပို့ကိုသညျအတိုငျးပဲထားရမညျလား၊တောငျပို့ကို ဖွိုခပြဈရမညျလားဟုမေးခဲ့ဖူးပါသညျမြားစှာသောလူတို့သညျအိမျထဲသို့မဟုတျခွံဝငျးထဲ၌တောငျပို့ပေါကျလာလြှငျကောငျးသညျဟုသာထငျမှတျကွလေ သညျရှေးလူကွီးသူမတို့ကမူကောငျးကြိုး၏ရှပွေ့ေးဖွဈသောတောငျပို့ပေါကျမှုနှငျ့မကောငျးကြိုး၏ရှပွေ့ေးဖွဈသောတောငျပို့ပေါကျမှုဟူ၍နှဈမြိုးရှိကွောငျးဆိုခဲ့ကွပသေညျ….။ ရှေးလူကွီးသူမတို့သညျအကွားအမွငျ၊ ဗဟုသုတရငျ့ကကျြကွသူမြားပီပီနောငျလာနောကျသားတို့တောငျပို့ပေါကျခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျးကိုသိမွငျမှတျသားလိုကျနာဆောငျရှကျနိုငျစရေနျ ကဗြာလင်ျကာမြားစပျဆို ထားခဲ့ပသေည၎င်းငျးလင်ျကာမှာ၁အရှတေ့ောငျခှငျ၊တောငျပို့ထငျ၊မီးလြှငျလောငျတတျစှ၂အနောကျပေါကျငွား ၊အောကျလူမြားနာဖြားဘေးဒဏျရ၃အနောကျတောငျတှငျ၊တောငျပို့မွငျ၊သူလြှငျ ခိုးတတျလှ၊၄ကွငျးငါးရပျမှာ၊ ပေါကျရောကျလာ၊မှနျစှာခမျြးကွညျမွ၊၅မကောငျးရပျနေ၊ပေါကျလာပေ၊ရှရေညျလောငျးလကွေ၊၆။ဤသို့ယတွာ၊ပွုသောခါ၊ရောဂါရနျကှယျဟူ၍ဖွဈသညျ။ အဋ်ဌလဂျခှငျအရအရပျရှဈပါးရှိရာ၁အရှမွေ့ောကျအရပျ၊၂အရှအေ့ရပျ၊၃အရှတေ့ောငျအရပျ၊၄တောငျအရပျ၊ ၅အနောကျတောငျအရပျ၊၆အနောကျအရပျ၊ရအနောကျမွောကျအရပျ၊၈မွောကျအရပျဟူ၍ဖွဈလသေညျအိမျအတှငျး၊ခွံဝငျးအတှငျးတောငျပို့ပေါကျသောအရပျသညျမညျသညျ့ အရပျ၌ဖွဈသညျကိုတိကစြှာသတျမှတျရပါမညျ။ရှေးလူကွီးသူမတို့မိနျ့ဆိုခဲ့သောကဗြာလင်ျကာအရတောငျပို့ပေါကျသောအရပျသညျအရှတေ့ောငျထောငျ့အရပျဖွဈပါကအိမျကိုမီးလောငျတတျသညျအနောကျအရပျတှငျဖွဈပါက လူငယျလူရှယျမြားနာဖြားတတျသညျ။ဘေးရနျသငျ့တတျသညျအနောကျတောငျအရပျတှငျဖွဈပါကနအေိမျတှငျသူခိုးခိုးခံရတတျသညျ။ကနျြသညျ့အရပျငါးမြိုးတှငျတောငျပို့ပေါကျပါကစညျးစိမျဥစ်စာကွီးပှားတိုးတကျခမျြးသာမညျဟု ဆိုလိုပသေညျမကောငျးသောအရပျတှငျတောငျပို့ပေါကျလြှငျမညျသို့ပွုလုပျရမညျကိုရှေးဗဒေကဝိတို့ကယတွာထားခဲ့ကွသညျ။၎င်းငျးယတွာမှာမိမိအိမျသောကျရအေိုးထဲမှရကေိုခပျ၍မကောငျးသောဘေးအန်တရာယျမြားပပြောကျပါစဟေု … Read more
ကျော်..နေတဲ့ မြို့ဟုခေါ်ပါသည် မြန့်မာရိုးရာ မုန့်အများဆုံး ရနိုင်တဲ့မြို့…!! ဝက်သားဒုတ်ထိုးကို ထမင်းလွတ်စားသောမြို့…!! ကားဝယ်ပီးရင် ဘုရားကြီးနဲ့ ဘိုးဘိုးကြီးကို ဦးတိုက်သောမြို့…!! ဘုရားပွဲဆိုဇာတ်စင်ကို လမ်းပိတ်ဆောက်တတ်သောမြို့…!! ကိုလေးဖြူ ရိုးပွဲ ဆိုရင် အချုပ်ကားပါ အဆင်သင့် ကားထိုးထားရသောမြို့…!! မိုးရွာရင် အလုပ်မလုပ်သောမြို့…!! သံဃာထု့အင်အား ကြီးမားသောမြို့…!! ရပ်ကွက်တိုင်းလိုလိုမှာ ဓမ္မာရုံ ဘုံဆွမ်းလောင်းအသင်း တွေရှိ့သောမြို့… သြင်္ကန်ချိန်ဆို စတုဒီသာတွေအပေါဆုံးမြို့…!! မီးနီမိရင်ကိုယ့်ပွိုင့် ကိုယ်မကြည့်ပဲ အခြားပွိုင့်မီးဝါနေပီ ဆိုဖြတ်ကူးတတ်သောမြို့…!! ယာဉ်စည်းကမ်းကို နားလည်မှုနဲ့မောင်းနေသောမြို့…!! လမ်းမသိလို့ မေးရင် အရှေ့ /အနောက် တောင် မြောက် ညွှန်းသုံးတတ်တဲ့မြို့…!! ခြင်အပေါဆုံးမြို့…!! မင်္ဂလာဆောင် ရှေ့ပြေးဆိုင်ကယ်များ ရှေ့ဘီးထောင် စတန့်ပြတဲ့မြို့…!! ကွမ်းယာဆိုင်အပေါဆုံး ကွမ်းစားသူအများဆုံးမြို့… ပဲပင်ပေါက်ကို တိုရလို့ခေါ်တဲ့မြို့…!! ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲတိုင်း အိမ်တိုင်းစေ့ အပြိုင်အဆိုင်ဧည့်ခံကျွေးမွေးတတ်တဲ့မြို့…!! တစ်လမ်းမောင်းများမှာ … Read more
ယောက်ျားလေးဆို (၃)မိနစ် အချိန်ပေးဖတ်ပြီး၊ မိန်းကလေးဆို ချစ်သူယောက်ျားမြင်အောင် ရှယ်လိုက်ပါ
၁။ သင့်ဇနီးသည်ဟာ ပြည့်စုံသူ မဟုတ်လို့ သူ့ ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ ၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အရိုးထဲက အရိုးဖြစ်လို့ သူ့ကို မရိုက်ချိုးပါနဲ့။ ၃။ သင့်ဇနီး ဟာ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်၊ တန်ဖိုးထားပါ။ ၄။ သင့်ဇနီးဟာ ရှားပါးတဲ့ ကျောက်မျက်အရိုင်းလေး ဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ မနာလို စိတ်လေးတွေကို လမ်းမှန် တည့်ပေးပါ။ ၅။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေပါ၊ သူ့ကို ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံပါ။ ၆။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက် စရာပါ၊ သူ့ကိုပြည့်ဝ အားအင်ရှိစေပါ။ ၇။ သင့်ဇနီးဟာ ယုယမှုခံထိုက်သူပါ၊ သူ့အတွက် ကျေနပ်ဝမ်းသာပါ။ ၈။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အဟာရပါ၊ သူ့ကို ယုယပါ။ ၉။ သင့်ဇနီးဟာ နတ်ဆိုးတစ်ကောင်မဟုတ်ပါ၊ စွန့်ပစ်မထားပါနဲ့။ … Read more
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထဘီတန်းအောက်ကို ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တတ်သလား? ” နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်ပါတယ် ၊ မနိမ့်ဘူးထင်ရင် မနိမ့်ပါဘူး” ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထဘီကြောင့် နိမ့်တာ မဟုတ်ပဲ ” ထင် ”ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန်ကြောင့်သာ နိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တာပါ …” ” ပိတ်စတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ပိတ်စ တစ်ခုဟာ သင့်ကိုဘယ်လိုများဒုက္ခရောက်စေမလဲ။ ဘုန်းနိမ့်တယ် ဆိုတာက သင်ထင်သလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။ “ဘုန်းနိမ့်ပြီဟဲ့”ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ဟာ negative feeling ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ စိတ် အလိုမကျဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ကို နောက်ကျိစေတယ် ၊ အဲဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ ” ” ဒါဆို အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ ဝင်ခဲ့မိရင်ရော နိမ့်မှာလား ” ” အဓိပ္ပာယ်မဲ့ … Read more